Yakanakisa mitambo yekupfura yePC | Gadget nhau
Paco L Gutierrez | 30/12/2020 10:00 | Yakagadziridzwa ku 30/12/2020 16:37 | General, videogames
Kana paine chero mhando inomira pamusoro pechero ipi papuratifomu yePC, ndiyo Shotters (mitambo yekupfura). Iri papuratifomu iyi apo iyi mitambo inowanzo shandiswa zvakanyanya, iine hombe katarogu yeavo vese, zvese mumunhu wekutanga uye mumunhu wechitatu. Tinogona zvakare kuwana yemakwikwi mitambo, iko iko kwepamhepo kunowana kurema, mazhinji eaya emitambo yepamhepo ndizvo zvatingaone muEsports. Kutamba nekhibhodi uye mbeva zvinopa yakawanda nzvimbo yekuvandudza, nekuti chinangwa paunenge uchifamba chinova nyore.
Mukati merudzi rwemitambo yekupfura, tinowana zvakajairika zvine mushandirapamwe, patinoperekedzwa nenyaya inotaurwa zvakanaka, emakwikwi emitambo yetimu, uko kushandira pamwe neshamwari dzedu kwakakosha kuti mukunde, kana iyo hondo royale, uko kutsvaga timu yakanakisa pamepu kunotibatsira kuhwina mutambo, zvese tiri vega uye nevamwe. Muchikamu chino tiri kuzokuratidza yakanakisa mitambo yekupfura yePC.
1 Kudanwa Kwebasa: WarZone
2 DAMBO Rokusingaperi
4 Denderedzwa rechiedza: The Master Chief Collection
5 Rainbow Six: Kutyisidzirwa
8 Hafu Hupenyu: Alyx
Kudanwa Kwebasa: WarZone
Iyo haigone kupotsa mune chero yepamusoro, Call of Duty yakwanisa kugadzira mutambo usati wamboitika uchivandudza izvo zvakaonekwa neBlackout muKuda kweDuty Black Ops 4. Mepu hombe yakanangana neMepu yeHondo Yemazuva Ano 2 mepu ine nzvimbo hombe panotambirwa vatambi zana nemakumi mashanu kusvika wekupedzisira amira. Mutambo une maitiro akati wandei, pakati pazvo atinogona kutamba isu pachedu, duos, trios kana quartet, tichiumba timu neshamwari dzedu kuburikidza neinternet. Mutambo unotipawo mimwe mitambo yemitambo pakupedzisira muchimiro chezviitiko, senge Halloween kana Kisimusi.
Uyu mutambo une muchinjikwa-chikuva mutambo, saka kana tiine wakagadzwa isu tinopinda muhondo nemapuratifomu ese ayo zita riripo, aya ari PC, PlayStation4, PlayStation 5, Xbox Imwe, Xbox Series X / S.. Kana isu tisingade kuyambuka mutambo kuti tienzanise chiyero, tinogona kuimisa chero nguva. Chinhu chakanakisa pamusoro penyaya iyi ndechekuti yakasununguka zvachose, ichipa mubhadharo mukati mechikumbiro chekutenga chombo kana matehwe emakwai. Chinhu chakakosha ndechekuti kubhadhara uku hakupi chero mukana, tinokwanisa zvakare kutenga pasiti yehondo ye € 10.
Iyo yakateedzana sequel kune iyo yekuhwina-kuhwina reboot yesaga yakaburitswa mu2016 yakagadzirwa neID Software, uko inotsvaga kupa yakanakisa mubatanidzwa wekumhanya, kupenga uye moto zvinogoneka. Mutambo uyu unomiririra chikamu chayo chega chinotipa maratidziro anoshamisa pamusoro pezvisikwa zvinobva pasi pevhu panonyanya kukosha ndechekuti vangave noutsinye sei, nekuda kweGore ravanopa. MuDOMO Nokusingaperi, mutambi anotora chinzvimbo chemhondi yerufu (DOOM Slayer) uye tinodzoka kuzotsiva kumauto egehena.
Mutambo uyu unomirawo wakanakisa kurira uye chikamu chinoonekwa chinobvisa hiccups zvisinei nepuratifomu yatinoitamba, asi paPC ndipo patinogona kuinakidzwa mukubwinya kwayo kwese, tichishandisa yakakwira kwazvo Framerate pa144Hz monitors.
Tora DOOM Eternal paAmazon kupihwa paiyi link.
Pasina mubvunzo mumwe wemitambo inozivikanwa kwazvo yemakore apfuura, chave chiitiko chechokwadi, mutambo unotambwa nevechidiki nevakuru. Iyo Hondo Royale uko timu kana mutambi uyo wekupedzisira akamira anokunda. Tinofanira kuongorora mepu yake hombe mukutsvaga michina yekurwisa vanokwikwidza. Kufanana neWarZone, ine crossover play saka vese PC uye vanonyaradza vatambi vanozotamba pamwechete kana vakasarudza kudaro.
Fortnite inomira kubva kune yakasara yeHondo Royale yeayo animated aesthetics uye yayo yechitatu-munhu maonero, iyo zvakare ine yekuvaka system iyo inopa yakawanda yakawanda dzakasiyana kune Gameplay. Kana iwe uchitsvaga unonakidza mutambo wekutamba nawo mukambani, uine zvishoma zvakakomba aesthetic, iri hapana mubvunzo isarudzo huru. Mutambo uyu mahara, mune zvaunotenga mukati mekushandisa kuburikidza nemari chaiyo yatinofanira kutenga kare. Isu tinogona zvakare kuwana iyo yehondo yekupfuura kuti tiwane zvinowedzeredzwa zvichibva pakutamba iyo.
Denderedzwa rechiedza: The Master Chief Collection
Iyo Master Chief iri Xbox icon uye yave kuwanikwa kune vese PC vatambi, mukana wekuridza iyo Halo saga yese. Raki rinosanganisira Halo: Kurwisa Kwakashanduka, Halo 2, Halo 3 uye Halo 4. Ivo vese vane resolution iri nani uye nekuvandudza mashandiro, mitambo ine yakadzika single player modes, kuti unakirwe imwe yeakanakisa sagas akagadzirwa neMicrosoft chete.
Uye zvakare, Microsoft yaisanganisira nhamba yakakura yemaseva akazvipira evatambi vakawanda, mutambo unofarira mutambo wepakati pakati peXbox nePC, saka hakuzove nekushomeka kwevatambi kumitambo yako. Nemunhu wekutanga maonero uye nevamwe vatorwa vavengi izvo zvinozotiisa isu kurwisa tambo uye inonakidza kwazvo Gameplay.
Tora Halo: Iyo Master Chief Unganidzo pamutengo wakanakisa pane Steam kuburikidza neizvi link
Rainbow Six: Kutyisidzirwa
Mumwe mutambo unomiririra pamakwikwi ayo, ndicho chikamu chazvino cheyaanozivikanwa saTom Clancy's Rainbow Six saga, inosanganisira single-player, mushandirapamwe uye 5 v 5. nzira dzevazhinji. Kubva pakurwisana pakati pemapurisa nemagandanga, nepo Magandanga anogara muchimiro, timu yemapurisa inofanira kuvauraya nemaitiro akasiyana ekurwisa. Mutambo uyu unosanganisira makirasi makumi matatu akapatsanurwa nemarudzi, rimwe nerimwe rawo richinyatsoita mhando yechombo kana hunyanzvi.
R6 inonakidzwa neimwe yenharaunda dzine simba kwazvo dzePC, ichitarisa kurema kwayo kukuru padivi repamhepo neEsports. Kubva payakatangwa muna2015, mutambo uyu hauna kumira kugashira emahara mhedzisiro uye mwaka unozvipa hupenyu husingaperi, pamusoro pekuderedza zvimwe zviputi zvinomuka kana kupindira kwevanobiridzira. Mutambo parizvino une mutengo unoyevedza, unogona kutambwa wega asi zvinokurudzirwa kuutamba neshamwari kuti unakirwe.
Tora Muraraungu Wechitanhatu: kukomba pamutengo wakanakisa paStam kubva pane izvi link
Izvo hazvigone kushayikwa mune ino runyorwa, kubva kune vakagadzira veTitanfall, Respawn Varaidzo yaburitsa yakanakisa yeTitanfall saga, kunyangwe ichiramba zita rayo, hazviite kudaro mumweya wefranchise ine kupenga uye kupenga Gameplay. Mutambo une mepu hombe uko tinotarisana nevazhinji vatambi kana zvikwata mukurwa uko chero wekupedzisira achakunda, sekune chero hondo royale.
Isu tinoratidzira ayo akasiyana akasiyana mavara, matinowana hunyanzvi hunyanzvi, senge robhoti ine hoko iyo ichabatsira kusvika kumusoro mapuratifomu. kana hunhu hunokwanisa kushandisa yekumhanyisa mhanyisa kana kugadzira iyo yekumhanyisa chikuva iyo inotitakura isu kuenda kune mumwe mugumo wemepu. Zvese zvinofambiswa nezvakasiyana-siyana zvezvombo kwatinogona kuwedzera ingame accessories, saka kana tikawana pfuti isina zvishongedzo, tinogona kuzviwedzera patinozviwana kana kuzvitora kubva kuvavengi vakaderera. Mutambo wacho wakasununguka nemari ye-in-app.
Tora Apex Legends pane Steam kuburikidza neizvi link
Yekupedzisira yeMetro saga, yakanangana nenyika yepashure-apocalyptic umo zvikara zvinotonga mumigwagwa, mutambo unotaurira nyaya yaArtyom, protagonist wemitambo yapfuura, pane rake basa rakaoma kutanga hupenyu hutsva kumabvazuva kweRussia inotonhora. Mutambo uyu une mamiriro ekunze ane simba nehusiku nehusiku zvikamu pamepu hombe izvo zvinovanza zvakavanzika zvakawanda uye nguva dzinotyisa.
Ekisodho ine budiriro yakavhurika uye inoshanduka nyika uko kutsvaga nekuunganidza zviwanikwa kwakakosha sekurwa nezvisikwa. Iyo haina multiplayer, chimwe chinhu chinoshamisa kuona mune wekutanga munhu shooter mutambo, asi zvinoongwa kuti iwe haukanganwe kuti kupfura mumunhu wekutanga kunogona zvakare kutakura zano kumashure. Ruzha rwemutambo uyu runobatsira kuzvinyudza mune zvakasikwa zvizere.
Tora mutambo uyu pamutengo wakanakisa neiyi Steam chinongedzo.
Hafu Hupenyu: Alyx
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, isu tinotaura chimwe chezvishamiso zve2020, ndicho chikamu chekupedzisira cheHafu Hupenyu. Kwete, haisi iyo inotarisirwa Hafu Hupenyu 3, Alyx mutambo weunyanzvi uyo unoshandisa iko kwechokwadi kutitakurira kuHalf Hupenyu hwenyika nenzira yakanakisa. Zviitiko zveinoshamisa nhoroondo yazvo zvinotiisa pakati pekutanga neyechipiri mitambo yesaga uye anotiisa mune shangu dzeAlyx Vance. Muvengi anokura nekusimba, nepo kuramba kunotora varwi vatsva kuzorwa nako.
Pasina kupokana ndiyo yakanakisa chaiyo chaiyo mutambo kusvika parizvino, isu tichaenda kunonakidzwa nazvo zvese nekuda kwenyaya yayo uye nemutambo wayo, nguva yayo inoshamisa kunyangwe iri mutambo weVR, uyo unowanzo tadza kwenguva pfupi. Marongero ayo ndeayo angatarisirwa nechero fan ye saga, ine mhepo inoshamisa uye marongero anotibvumidza kusangana nechero chinhu chatinowana. Nharaunda inoshanda zvisingaite kugadzira mods uye kuwedzera mutambo. Mutambo uyu hapana mubvunzo kuti ndeimwe yeanonyanya kudzvanywa paPC, saka isu tichazoda zvigadzirwa zvemazuva ano, pamwe nemagirazi anoenderana.
Tora Hafu Hupenyu: Alyx pamutengo wakanakisa mune izvi Steam chinongedzo.
Kana usiri shooter, mune ino imwe chinyorwa tinokurudzira iwe kutyaira mitambo, isu zvakare tinokupa iwe kurudziro pamitambo yekupona.
Kana iwe usina PC iwe unogona kutarisa ino chinyorwa kupi tinokurudzira mitambo yePS4 kana iyi imwe kupi tinokurudzira nharembozha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Musha » videogames » Yakanakisa mitambo yekupfura yePC